यसरी सेक्सका लागी पार्टनर लाई आकर्षित गर्नुस् | Seto Khabar
यसरी सेक्सका लागी पार्टनर लाई आकर्षित गर्नुस्
जब तपाई आफ्नो मुड खराब भएको अवस्थामा के गनुहुन्छ ? फिल्म हेर्नु हुन्छ , गेम खेल्नु हुन्छव वा केहि खानेकुरा खानु हन्छ ? तर कुनै यस्ता कुरा छन् जो तपाईको कोठामा आवश्यक हुन्छन् ।
मिर्ररयुके अनलाइन ले यस प्रकारको सुची बनाएको छ जुन कोठामा हुदा आफ्नो मुड अफ हुदैन । हाल एक रिसर्च ले बताए अनुसार एक दिनमा संसारका दश करोड मानिसले यौन सम्र्पक गर्छन् । तर खबर यो पनि छ कि यति नै मानिस मुड खरावको कारण आफ्नो यौन सन्तुस्टि लाई पुरा गर्न सक्दैनन् । यी कुराहरुको ख्याल गर्नुस जसले तपाइको पाटर्नरको ध्यान तपाई तिर बढ्छ ।
यदि तपाइलाई सेक्स गर्न मन नभए के खाना खानु हुन्छ ? एक रिसर्चको अनुसार तपाईले यस्तो कार्य गर्नु भयो भने तपाईको पार्टनरको मुड खराब हुन्छ । रिसर्चको अनुसार प्राय मानिसहरु पिज्जा खान्छन् । यदि तपाईको मुड खराब भयो भने यस्तो कार्य नर्गनुहोस् ।
तपाईको प्रेमिका वा प्रमी सगैँ भएको अवस्थामा सेक्स गर्न कुनै मुड नभएको अवस्थामा तपाई फिल्म हेर्नु हुन्छ ? यदि हेर्नु हुन्छ भने तपाई ठिक गरीरहनु भएको छ । आफु एक्लै नभई सगै रोमान्टिम फिल्म हेर्नु जुन फिल्म तपाईको पार्टनरलाई पनि मन परोस । रोमान्टिक फिल्मबाट तपाईको पार्टनर तपाईसँग सेक्स गर्नको लागी प्रेरीत हुन्छिन् ।
खेलकुद भनेपछि को चाहिँ पछि हट्छ र ? यदि तपाई लागी सेक्सको इच्छा छ भने तपाई अनलाइन गेम खेल्न सक्नु हुन्छ । जसमध्य पोकर गेमलाई बढि प्राथामिकता दिनुहोस् ।
सेक्स बारेमा सोच
यदि तपाई सेक्सको बारेमा सोच राख्नु हुन्छ भने यसले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ । एउटा सर्बेक्षण यो भनेको छ कि पुरुष सात मिनेटमा एक चोटि र महिलाले पनि दश मिनेटमा एक चोटि सेक्सको बारेमा सोच्र्दछन् ।